AmaZulu afuna ukudunga uKhisimusi wabeBucs - Impempe
AmaZulu afuna ukudunga uKhisimusi wabeBucs
UTapelo Xoki waMaZulu FC
Ngemuva kokuphoqoza irekhodi lokungashaywa leMamelodi Sundowns ngoMsombuluko, AmaZulu afuna ukudlulela kwi-Orlando Pirates ayokwenza okufanayo ngoLwesine.
ISundowns bese kuphele imidlalo engu-17 yeligi ingayazi induku kodwa Usuthu lwafika lwayishaya ngo 1-0 emdlalweni weDStv Premiership eJonnson Kings Park. Beluqala ukuwina lubhekene neSundowns ekhaya ngemuva kweminyaka eyishumi.
AmaZulu azovakashela e-Orlando Stadium ngoLwesine lapho ebuye akuthole kunzima ukushayela khona i-Orlando Pirates ikakhulukazi kula masizini edlule. Emidlalweni engu-16 edlalwe yila maqembu kwesikaMaminzela, AmaZulu awine emine, adlala ngokulingana eyishumi, ase eshaywa kwemibili.
Nokho umdlali wasemuva woSuthu uTapelo Xoki ukholwa ukuthi akukho okungabehlula ukukwenza njengeqembu uma bezimisele.
“Kuleli qembu lethu kungenzeka noma yini. Ziningi izinto esizenze okokuqala futhi yinqwaba yamarekhodi esesiwaphulile,” kusho uXoki.
“Ngeke usho ukuthi ngeke siyenze into ethile. Besingazi nathi ukuthi iqembu bese liqede iminyaka emingaka lingakwazi ukushaya iSundowns uma lidlala ekhaya. Sizizwa kahle kakhulu ukuthi sikufezile lokho.”
Ukuwina e-Orlando kungasho ukuthi AmaZulu azoya ekhefini likaKhisimusi ehambela phezulu.
“Ukuya e-Orlando ngeke kube lula neze. Nokho ukuthi emiqondweni siyazi ukuthi sekunesikhathi sagcina ukuwina kungase kusikhuthaze kakhulu. Okuzosigqugquzela kakhulu kodwa amaphuzu amathathu esiwadinga kakhulu.
“Sesidlale imidlalo eminingi kunamanye amaqembu ngakho sidinga ukwenza isiqiniseko sokuthi siqoqa amaphuzu ngaphambi kwekhefu likaKhisimusi. Sizoya laphaya ngenhloso yokubuya namaphuzu amathathu, irekhodi lizoza kamuva,” kuphetha uXoki.
Lesi sitobha siqokwe njengomdlali oshaye into ecokeme ngesikhathi bedla iSundowns ngoMsombuluko.
Previous Previous post: AmaProteas agilekile kuhoxa uNortje
Next Next post: IChiefs iphonsa inselelo kwiPSL ngolweCorona